Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Eo amin'ny faravodilanitra ve ny Apokalipsy Zombie?
Nitranga ihany izany, tonga ny apokalipsy zombie! Ny fiainana araka ny fantatsika dia hiova mandrakizay! Tsy misy fandaharana amin'ny fahitalavitra intsony, tsy misy lalao video intsony, tsy misy Twitter intsony!?! Ahoana no hahavelomantsika!? Ary andraso kely, inona no hohaninay?! Tsy misy sakafo haingana intsony, tsy misy fivarotana kafe intsony, tsy misy fampiharana fanaterana sakafo amin'ny fangatahana ary tsy misy fivarotana enta-madinika intsony? Inona no hataontsika eto amin'izao tontolo izao?
Ny vaovao tsara dia tsy tena izy io lohateny io. Ny vaovao ratsy dia mbola tsy miomana ianao. Fa jereo ny lafiny mamirapiratra. Ny Key To Life Supply dia eto hanampy! Afaka manomana anao, ny fianakavianao, ny namanao ary ny manodidina anao amin'izany izahay. Amin'ny fianarana mamboly ny sakafonao manokana, ny fanazaran'ny zanakao ny fihinanana sakafo mahasalama sy vaovao vokarinao ary miara-miasa amin'ny mpiara-monina aminao mba hizara sy hivarotra izany sakafo izany, dia ho tafavoaka velona amin'ny apokalipsy zombie isika rehetra! Soa ihany fa mahafinaritra ny mamboly ny sakafonao manokana, mora kokoa noho ny eritreretinao, asa kely noho ny eritreretinao, ary tsy voatery manao izany irery ianao! Manana ny zavatra rehetra ilainao ny fianakaviana Key To Life Supply. Amin'ny alàlan'ny tambajotra mpiara-miombon'antoka sy ny mpiasan'ny mpanabe manan-talenta, dia afaka mampiseho anao ny fomba fambolena voankazo sy legioma betsaka.
Ambonin'izany, mitombo ara-organika sy mianatra teknika fanaovana zezika tsotra miaraka amin'ny fako avy amin'ny zavamaniry ianao, dia afaka manangana indray ny tany ianao ary lasa tsy miantehitra amin'ny zezika. Ny zaridainanao dia hitombo be dia be amin'ny tany izay naverina tamin'ny laoniny mba hanampiana ny zavamaniry hivoatra araka izay tratrany. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrom-piarahamoninao, ny tsirairay dia afaka mifantoka amin'ny fampitomboana zavatra hafa kely mba hahafahantsika manaram-po amin'ny karazan-tsakafo matsiro. Ny fanangonam-bokatra tsotra, ny fanangonam-bokatra, ny tsy fahampian-drano ary ny fitehirizana sakafo araka ny tokony ho izy dia hiantoka ny fitohizan'ny fiaraha-monina, na dia mandritra ny ririnina mafy indrindra aza.
Hitanao àry fa tsy misy tokony hatahorana! Na dia hivadika ho rava aza izao tontolo izao, dia tsy mila manahy momba ny fihinanana sakafo alika lany andro ianao mandritra ny androm-piainanao. Afaka mihinana toy ny mpanjaka ianao sy ny fiaraha-monina misy anao satria nahazo ny fahaizana sy fahalalana ilaina mba hanomezana izay ilain'ny olombelona tsotra indrindra, sakafo matsiro. Ary ny vaovao mahafaly dia, na dia tsy mamokatra aza ny apokalipsy zombie, dia manana fahafahana hampihena ny dian-tongotrao karbônina ianao izao, hiaina maharitra kokoa, hanorina hery fiarovana matanjaka kokoa amin'ny fihinanana pesticides sy sakafo tsy misy simika, hampitombo ny sandan'ny fanananao ary omeo tambajotran'ny fahaleovan-tena ny vondrom-piarahamoninao. Manentana anao izahay handray ny dingana voalohany ary hifandray aminay amin'ny Key To Life Supply dieny mbola tsy tara!